Fenoarivo Atsinanana, 09 Oktobra 2020 - Ao anatin'ny fampiharana ny Drafitra Fisandratan’i Madagasikara (PEM), entina mampiroborobo ny fahazoana rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana, dia voafidy i Analanjirofo amin'ity taona 2020 ity ho faritra fanandramana ao anatin’ny drafitr’asa « Madagasikara Madio ». Ny fanokafana izany hetsika amin’ny fomba ofisialy dia notronin’ny Minisitry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, Voahary Rakotovelomanantsoa.
Ao anatin’ity hetsika ity dia niara-nivory tao Fenoarivo Atsinanana ny distrika enina ao amin'ny Faritra, ho fiatrehana ny ady amin'ny fahazarana manao maloto ankalamanjana ao amin'ny fokontany rehetra ao anatin’ireo kaominina 71 ao Analanjirofo. Kendrena amin’izany ny hametrahana « Analanjirofo Madio » izay mampiroborobo ny fomba fidiovana sy mampiasa fotodrafitrasa fanadiovana eo anivon’ny fiarahamonina. Ny fanombohana ity hetsika ity dia nampivondrona ireo olom-boafidy sy manampahefana voafidy maro avy any amin'iny faritra iny, ho firaisankina amin'ireo vondrom-piarahamonina izay manana tahan’ny fahazoana fotodrafitrasa fanadiovana mbola ambanin’ny 15%. Ny tanjona dia ny hametrahana ny satan'ny « Famongorana ny fanaovana maloto ankalamanjana (FDAL) » eo anivon’ny vohitra, Fokontany ary Kaominina rehetra alohan’ny Desambra 2020 ho avy zao.
Ity hetsika fandraisan’andraikitra ity dia eo ambany fitarihan'ny Minisiteran'ny Rano, Fanadiovana ary Fidiovana (MEAH), ary nahazo fanohanana ara-bola avy amin’ny mpiara-miombon'antoka marobe, toy ny tetik’asa Fonds d’Appui pour l’Assainissement (FAA) izay novatsian'ny « Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement (WSSCC) » vola ary ny UNICEF. Mbola misy mpisehatra hafa ihany koa nanohana io hetsika io ka anisan’izany ny GRET, ny USAID amin'ny alàlan'ny Mahefa Miaraka, ny ACCESS, ary ny PADAP. Noho ireo fanohanana voalaza ireo dia afaka mamaly ireo filàna mifandraika amin’ny laharam-pahamehan'ny sehatra amin’ny fotoana tena mahamety azy ity hetsika ity; ka tafiditra ao anatin’ny Tondrozotra « Madagasikara Madio 2025 » izany.
Ny tanjona lehibe indrindra amin’ity fandraisan’andraikitra ity dia ny mba hahatonga ny faritra Analanjirofo ho FDAL, sady hahafahany miantoka ny fahazoan’ny olona maherin'ny 360.000 fotodrafitrasa fanadiovana sy fidiovana fototra. Miaraka amin'ny foto-kevitra tsy misy fanampiana na “Zéro subvention” amin’ny alàlan’ny fananganana lava-piringa no hanatanterahina izany. Ireo vondrom-piarahamonina misitraka io hetsika io dia afaka hampiasa miandalana sy amin’ny fomba maharitra ireo fomba fanao mendrika, amin’ny alàlan'ny fampiasana lava-piringa isan-tokantrano miaraka amin'ny fanasan-tanana, ka noho izany dia ho afaka handringana tanteraka ny fifindran’ny loto avy amin’ny diky izy ireo eo amin’ny fiainany andavanandro. Ny asa izay tanterahan’ny mpiaramiombon'antoka voakasik'izany no hahafahan’ireo vondrom-piarahamonina misitraka izany rehetra izany. Ny fandraisan’andraikitr’ireo tompon'andraikitra eo an-toerana dia efa maneho ny fahavononan’izy ireo hanohana ireo vondrom-piarahamonina amin’ny fahatratrarana ny tanjona izay hahatonga ity Faritra ity ho FDAL.
Ny fanombohana ny hetsika “Analanjirofo Madio” dia mifandraika ihany koa amin'ny faneken’ny Minisiteran'ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana hanamafy ny fiaraha-miasany amin’ireo mpamatsy vola sy ny fandaharan'asa mikasika izany sehatra izany.
« Satria aho te hahita an'i Madagasikara ho firenena manana mponina miaina anaty tontolo salama sy madio, amin'ny maha Minisitra miadidy ny rano, fanadiovana sy fidiovana ahy, dia manohana izay hetsika rehetra hahafahana mahatratra izany tanjona izany, ary koa hahitana izay fomba hiatrehana izany fanamby lehibe izany aho. Ny fahombiazan'ny fandaharan’asa Madagasikara Madio dia tombotsoa ho an’ny firenena iray manontolo, saingy ny fampiharana azy dia mifototra amin'ny fifandraisan’ireo sehatra maro voakasik’izany ary miankina amin'ny fandraisan’anjaran'ny rehetra, eo ambany fitarihana matanjaka avy amin'ny Minisitera, » araka ny nambaran’ny Minisitry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, Ramatoa Voahary Rakotovelomanantsoa.
Misy fifandraisany mivantana amin'ny fahamendrehan'olombelona ny famongorana ny fanaovana maloto ankalamanjana, satria tsy misy Malagasy intsony na iray aza mendrika ny hampiditra am-bava ireo loto ateraky ny diky, eny fa na dia tsy nahy aza izany, noho io fomba fanao ratsy io. Noho ny tsy fahampian'ny fahazoana rano fisotro madio, ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara dia mety ho lasa nofinofy ihany, raha toa ka mbola ampahany betsaka amin'ny Malagasy no manohy manao maloto ankalamanjana. Araka izany, « Tokony hiara-mientana daholo isika rehetra mba ho tanteraka ilay vina mba hahatongavana amin’ny hoe "Madagasikara, ilay firenena maodely tsy ahitana fanaovana maloto ankalamanjana,” hoy Dr Rija Lalanirina FANOMEZA, talen'ny Programa FAA eto Madagascar.
Mikasika ny UNICEF indray dia mifantoka amin'ny maha-zava-dehibe ny fidiovana izy. « Misy fifandraisana mivantana ny fampandrosoana ny firenena toa an'i Madagasikara sy ny fomba fidiovana ao aminy », hoy i Michel Saint-Lot, solontenan'ny UNICEF eto Madagascar. « Izany no antony maha-zava-dehibe ny famongorana ny fanaovana maloto ankalamanjana sy ny fampiroboroboana ny fampiasana lava-piringa. Ny fianakaviana tsirairay, ny fokontany tsirairay avy dia samy manana ny anjara birikiny amin'ny fahatratrarana io tanjona io. »
Mahefa Miaraka dia miditra an-tsehatra any amin'ny faritra Analanjirofo, amin'ny alàlan'ny fampidirana fomba roa vaovao hahafahana mampandray andraikitra ireo mpisehatra eo amin'ny fiarahamonina; tsy inona izany fa ny “kaominina tompon-daka” sy ny “tokantrano maodely sady mpiahy”. « Ny faneken’ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny ambaratonga rehetra, mba ho mpanentana sy maodely ho an'ireo olona mitovy aminy, dia hahafahana mitazona sy mampaharitra ireo tombony efa azo, ary mitondra anjara biriky amin'ny fanatanterahana ireo tanjon'ny Analanjirofo Madio, » Dr Yvette Ribaira, talen'ny programa.